Kanti ungasindwendwela nakumakhasi ethu onxibelelwano uFacebook: City Vision Live okanye uTwitter: @cityvisionlive kungenjalo usindwendwele kumnatha wethu ongu www.cityvision.co.za
ISACI: Unyawo lwambeth’indlela.
ISACI: Umntu ongenandonci.
IQHALO: Unyawo alunampumlo.
Isisele senyathi: Noluthando Mahlathi-Fuku, Nyanga: Umntu onomava.
Akukho rhamncwa lingagqumiyo kowalo umngxuma: Noluthando: Oyena mntu uligwala, nodeliweyo uzibona ubunto nobunganga endlwini yakhe.
Isisele senyathi: Kutshiwo kumntu olumkileyo, umntu onamava. Kaloku inyathi idume ngobulumko namaqhinga okuzimela nokuhlasela aabo bayizingelayo.
Akukho ramncwa lingaqqumiyo kowalo umngxuma: Eli qhali lithetha ukuthi noyena mntu uligwala uya zikhusela kowakhe umzi. Sonke isilo sakubhaqwa, singcacela ngasemngxunyeni waso. Nomntu ke, noyena udeliweyo uzibona ubunto nobunganga endlwini yakhe.